Fraport Ejima Star na-enweta Innovative Employer award
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airport » Fraport Ejima Star na-enweta Innovative Employer award
Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Akụkọ kacha ọhụrụ na Germany • News • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Ihe nzuzo Njem • Akụkọ dị iche iche
Site na Twin Star na-anata Onyinye Innovative Ọrụ na Albena Beach
Ọtụtụ puku ndị ọbịa bịarutere n'oge okpomọkụ a na ọdụ ụgbọ elu Varna (VAR) na Burgas (BOJ) na Bulgaria nke Black Sea Coast ga-anabata ya site na agba dị iche iche na isi ụtọ na-atọ ụtọ nke 5,000 ọhụrụ Roses. Uniquelọ ọrụ ụgbọ elu Bulgarian Roses a pụrụ iche bụ naanị otu n'ime ihe karịrị ọrụ mmepe dị iche iche 150 malitere n'oge mkpọchi Corona site n'aka ndị ọrụ Fraport Twin Star Airport Management AD - ụlọ ọrụ ahụ na-arụ ọrụ ụzọ abụọ a na-aga 400-kilometa -mgbe mpaghara ezumike Black Sea Coast.
Oge ọkọchị nke Roses na-echere ndị ọbịa na ọdụ ụgbọ elu Varna na Burgas: ọnụ ụzọ ámá nke Osimiri Ojii Black Bulgaria.
Ndị ọrụ na Fraport atụgharịrị mkpọchi COVID-19 ka ọ bụrụ ihe ziri ezi site na ịmecha ọrụ mmezi 150.
Ndi ACI gbaara Fraport n’okpuru udi Healthy Airports.
N’ịkwanyere nkwado na ntinye aka nke ndị ọrụ ya, Fraport Twin Star natara onyinye Innovative Employer na nso nso a site na Federation of Trade Trade Union na Bulgaria. Emebere nke ọma n'afọ a, onyinye ọhụrụ a na-asọpụrụ atụmatụ Fraport Twin Star nke na-abara ndị ọrụ ọdụ ụgbọ elu na ndị ọbịa uru. N'inye onyinye a na emume dị na Albena Beach Resort dị nso na Varna, Ekaterina Yordanova, onye isi oche nke Federation of Union Union Trade kwuru, sị: “Fraport Twin Star tụgharịrị ejighị n'aka nke nsogbu COVID-19 gaa ezigbo ume - na-enye ndị ọrụ afọ ojuju nke imezu otu ihe mgbaru ọsọ otu - imepụta gburugburu ọdụ ụgbọ elu dị mma ma na-akpali akpali. ”
sipwdg Twin Star ndị ọrụ nyere ngụkọta nke 30,000 awa maka ụfọdụ 150 oru na Varna na Burgas ọdụ ụgbọelu.
Ihe oru a abughi nani ime ka ogwe ahihia na ebe ikuku di nma, kama ha mekwara ka ihe bara uru ma mekwaa ebe oru diri ndi oru. Dịka ọmụmaatụ, a rụzigharịrị ọfịs na ebe izu ike ndị ọrụ, ebe ọha na eze na akụrụngwa ọdụ ụgbọ elu. Fraport Twin Star chọrọ iji ikike ọrụ ya mee ihe n'ụzọ kachasị mma n'ihi nrịba ama na-adaghị adaba gafee Europe.
Fraport Twin Star CEO Frank Quante kwuru, sị: “A kwadebere mpaghara ọdụ ụgbọ elu niile d Burgas n'ụzọ kachasị mma - yana ọtụtụ puku Roses ndị a ma ama na Bulgaria - ịnabata ndị njem na ndị ọbịa na Varna na Burgas na oge ezumike njem njem nke 2021. Anyị adịla njikere maka ndị njem nleta ma kpọọ mmadụ niile ka ha nọdụ na Mara Oké Osimiri Ojii Bulgaria, yana ọdịbendị ya bara ụba na oke osimiri zuru oke. ”
Roses nke Bulgaria na-echere ndị ọbịa na ọdụ ụgbọ elu Burgas
Onye isi oche Quante kwusiri ike na ọdụ ụgbọ elu Twin Star natara asambodo ọdụ ụgbọ elu Healthy site na ACI Airports Council International, ndị otu ụlọ ọrụ zuru ụwa ọnụ. “N'ime ihe eji arụ ọrụ 60 nke ACI nyochara gosipụtara omume ụlọ ọrụ anyị kacha mma. Nke a gosiputara oke mbọ Fraport Twin Star megoro na itinye usoro nchekwa na usoro ịdị ọcha zuru oke na Varna na Burgas, “Quante kwukwara. Usoro nchedo ahụike Twin Star gụnyere nhicha miri emi na disinfection, nyocha ahụike, nhụpụ anụ ahụ, ọdụ ụgbọ elu ndị ọrụ ụgbọ elu, nchebe ndị njem, nkwukọrịta buru ibu site na ntanetị na ntanetị, usoro ọrụ ndị ahịa ahaziri iche, nhazi ụlọ ọrụ, na ịhazi usoro. Otu ọrụ dị mkpa bụ ọgwụgwọ ọtụtụ puku ebe dị elu kọntaktị na ọdụ ụgbọ elu Twin Star site na iji mkpuchi nke mgbochi microbial nanotechnology maka nchebe ogologo oge.
Ozi ndị ọzọ gbasara Fraport.